Soora Qalbii - NuuralHudaa
Biyyi teenya Itiyoophiyaan waggaa sadi dura, saatalaayitii takka gargaarsa mootummaa Chaaynaatiin gara hawaa erguun isii beekkameera. Saatalaayitiin observatory taate ykn ammoo lafa akka qorattuuf ergamte tun seenaa biyya keenyaa keessatti tan jalqabaati.…
Nuuralhudaa	 Jun 4, 2022
Rabbiin ilma namaa waa heddu badhaasee, waa hedduun qananiise. Waan Rabbiin ilma namaa badhaase keessaa wanti…
Nuuralhudaa	 Jun 2, 2022
NuuralHudaa	 May 29, 2022
Nuuralhudaa	 May 28, 2022
1 Marii Haala Yeroofi Tumsa Nuuralhudaa 01:11:35
2 Waan Ofii Abbaatu Jabeeffata: Walaloo Suudii Jamaal Nabii 05:01
3 Dhaamsa Sagantaa Qubsiisa Aalimaa Magaalaa Hasaasaa 30:54
4 Marii addaa miseensota boordii Nuuralhudaa S.C wajjiin godhame. 02:07:54
5 Sagantaa Tumsa Miidiyaa Nuuralhudaa idil addunyaa 2022 03:12
6 Ustaaz Xaaliburidallaah: Dhaamsa Gabaabduu 06:27
7 Farhiyaa Fi Usmaan Haala Addunyaan itti jirtu 03:52
8 Farhiyaa fi Usmaan: Goota Seenaan Galmeessite, Bilaal Ibnu Rabaah 05:28
9 Farhiyaafi Usmaan: Qorqodummaa Daangaa Dabre 04:48
10 Farhiyaa fi Usmaan: "Tiysiteen dhihotti dagatte fagootti barbaaddi" 03:26
11 Gaafiif Deebisaa Ustaaz Xaaliburidallaah waliin godhame 25:29
12 Barattoonni Yunversiitii Riftivaalii Ustaaz Abdurrahmaan Huseeniif kennaa addaa gumaachan. 05:49
13 Ustaaz Abuu Mujaahid: Nashiidaa Haaraya, Ustaaz Xaalibuu 04:48
14 Ustaaz Abdurrahmaan Huseen (Xaalibu Ridallaah) Gorsa Gabaabaa 09:38
15 Rakkoo Nuuralhudaa Mudateefi Bu'aa Bayii Keessa Dabrame 44:05
16 Hidhamuu Ustaaz Abdurrahmaan Huseen irratti xiyyeeffachuun, Ibsa Nuuralhudaa irraa kenname. 05:46
17 Abdulwaahid Malkee: Fidaaka Abii Wa Ummii Yaa Rasuulallaah, Walaloo 09:58
18 Sheikh Jamaal Muhammad: Tokkummaa 12:25
19 Tafakkur: Peacock, Allaattii Ajaa'ibaa 04:42
20 Tafakkur: Bineensa Uumama 3 Fakkaatu (Okaappii) 04:40
21 Godaansa Rasuulaa (SAW) Dr. Abdallaah Khadiir 46:41
22 RNH 693, July 26, 2021 Qophii Addaa 01:24:20
23 Keeysummaa iidaa: Sheikh Bushraa Hadiisaa 23:58
24 Keeysummaa iidaa, Ustaaz Hakiim Hassan 44:18
25 Qophii IIDAA: Magaalaa Dirree dhawaatti 01:03:05
26 Waltajjii iidaa: Magaalaa Harar 1442H 01:03:31
27 Aafiyaa: Soorataa fi iidaa Kutaa 2ffaa 01:00:01
28 Salaata iidal Adahaa bara 1442H magaalaa Adaamaa 26:52
29 Osoo isin taatee maal gootan? 46:00
30 Gaafilee Boohartii iidaa ittiin booharaa 12:00
31 dhaamsa dhageeffattoota Raadiyoo Nuuralhudaa Kutaa 2ffaa, 1442/2021 32:32
32 Falmataa Roorroo: Ziyaaraa iidaa 01:05:13
33 dhaamsa dhageeffattoota Raadiyoo Nuuralhudaa Kutaa 1ffaa, 1442/2021 23:08
34 Ustaaz Kamaal Amaan-Uduhiyyaafi Dalagaa Guyyaa Iidaa 21:04
35 Dhaamsa Prezdantii Majliisa Oromiyaa-Baga Jala Bultii Iidaatiin Isin Gahe 12:47
36 Ahkaama Uduhiyyaa-Sheikh Abdussalaam Xaahir 42:05
37 Adaba Hajjii Kutaa 8ffaa _ Ziyaaraa Masjiida Rasuulaa (SAW) Kutaa 2ffaa 12:30
38 Adaba Hajjii Kutaa 7ffaa _ Ziyaaraa Masjiida Rasuulaa (SAW) 11:54
39 Sadarkaa Kurnan Ji'a Hajjii Kutaa 2ffaa: Dr Jibriill Qamar fi Dr. Abdulaziiz Muhammad 37:02
40 Sheikh Abdussalaam Khadiir: Sadarkaa Kurnan Zulhijjaa Kutaa 2ffaa 30:29
41 Marii Baankii Raammis: Magaalaa Adaamaa 01:17:26
42 Sadarkaa Kurnan Ji'a Hajjii_Dr.Jibriil Qamar fi Dr.Abdulaziiz Muhammad 30:40
43 Ustaaz Hakiim Hassan: Hojiilee Hajjitti Qixxooytu 31:24
44 Haaji Aloo Kabiir fi Sheikh Miftah Tamaam_Artii Islaamaa Kutaa 1ffaa 24:38
45 Sheikh Abdussalaam Khadiir_Sadarkaa Kurnan Zulhijjaa 29:54
46 Argannoowwan Saayinisii Qur'aana Keessatti: Kutaa 1ffaa_Tashitee Roobee 32:58
47 Sagantaa Du'aa'ii Hawaasa Keenya Kan Sa'uud Arabiyatti Dararamaa jiruuf 51:23
48 Beeksisa Ariifachiisaa! Namoota Viidiyoo Nuuralhudaa Youtube keessan irratti maxxansitan hundaaf! 02:15
49 Sagantaa Eeyba Studio Gaaddisa Islaamaa Nairobi 01:00:52
50 Torbee Deeggarsa Majliisa Oromiyaa, Sheikh Amiin Ibroo fi Sheikh Hajjii Ibraahim 48:04
Nuuralhudaa	 May 27, 2022
Rabbiin (SW) haala uumama ilma namaa yeroo dubbatu, ilma nama haala gaarii irratti isa uumne jedhe. Dhugaadha…
Nuuralhudaa	 May 24, 2022
Monkeypox dhukkuba darbee darbee muldhatu kan Vaayirasii ‘Monkeypox virus’ jedhamuun dhufu dha. Monkeypox virus-n…
Nuuralhudaa	 Apr 30, 2022
Ramadaana tokko jennee jalqabne amma gara xumuraatti dhihaannee jirra. Torbaan sadih dura yeroo seenu fagoo nutti…
Nuuralhudaa	 Dec 16, 2021
Dhangala’oowwan armaan gadii kanneen gatiin haalaan qaalii tahan keessaa muraasa yoo tahan, Gatiin armaan gaditti kaahame hundi…
Saayintistoonni Ija namaa laalanii kaameraa hojjatan. gurra namaa laalanii Microphone dalagan. allaattii laalanii xayyaara…
NuuralHudaa	 Oct 19, 2021
Yeroo meeqa Furtuu manaa bakka Jiru wallaaltanii rakkattan? Riimoota TV dhabdanii barbaadaa hin oollee? Meeshaan nama jalaa…
Nuuralhudaa	 Feb 18, 2021
Emreets Rokeetii qorannoo Hawaa “Hope” jechuun moggaaste ji'a saddeet dura gara Plaaneetii Mars jedhamtu erguun, biyyoota Arabaa…
Kanadaan Appilikeeshina Telefoona nama dhibee COVID-19’n faalame adda baasu…
Nuuralhudaa	 Aug 2, 2020
July 7, 2022 sa;aa 2:13 am Update tahe
Biyyoonni addunyaarra jiran aadaa fi duudhaa mataa isaanii qabu. Wantoota biyyoota biraa irraa adda isaan taasisus ni qabu. Aadaan biyya tokkotti jaalatamu, tarii bakka biraatti jibbamuu dandaya. wanti isa tokkoof salphaa kan biraatiif ammoo ulfaataa tahuu mala. Haaluma kanaan barruu tana keessatti asuma ardii teenya keessaa biyya ajaa’ibaa kan…
Lafti irra jiraannu tun irra caalaan isii bishaaniin uwwifamee jira. Lafa tanarraa Parsantii 71.6 kan ta’u qaamma bishaaiiti. Kan hafe parsantiin 29.4 lafa…
Dachii tana keessa wantoota qaqqaalii heddutu jira. Gariin makiinaa, kaanis sa’aatii harkaa gatii haalaan qaalii taheen wayta bitatu argineerra. Garuu…
Qaamman bishaanii keessa uumama lakkaawamnee hin dhumne hedduutu jira. Uumamni barruu tana keessatti ilaallus galaana keessatti kan argamu yoo tahu, maqaan isaa DISKAS jedhama. Diskas sanyii qurxummiiti. Hedduun keenya Ispoortii irratti maqaa discus throw jedhamu dhageenyee jirra ta’a. Discus throw jechuun gosa dorgommii ispoortiiti. Maqaan uumama…
Jaarraa tokko dura addunyaan tun akka har’aa hin turre. Haalli jiruufi jireenya ummataa, guddinni teknoolojiifi qarominni addunyaa hedduu booddetti hafaa…
Sanyiin uumama kanaa gosti 3 kan jiru yoo ta’u, garaagarummaa rifeensaa malee qaamni isaanii walfakkaataadhaa. Miirkaat hoosiftoota xixiqqaa keessatti…
Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee beeka. Nama beekutu waa dalaguu dandaya. Kan biyyaaf faaydaa qabuus nama beekumsa goonfateedha. Arraan tana keessattuu jaarraa 21ffaa kana keessa baruumsi teeknolijiin deeggaramutti jira. Haa tahue malee babal’achuun teeknolojii…
Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda boqonnaa fudhata. Kanaaf Rabbiin halkan yeroo boqonnaa…
Nuuralhudaa	 May 14, 2022
Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa tanaa boorawaa dhufe. Biyyoonni yeroo ammaa jiran kunniin…
Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba. Garbuun gosa garagaraa qaba, qamadiin gosa garagaraa qabdi, ilmi namaa bifa fi sanyii garagraa qaba, wanti hundi sanyii garagaraa heddu qaba. Haala Kanaan sanyiiiwwan dachii kana irra jiran laakkawuu yoo jalqabne malee, xumuruudhaaf umriin qabnu…
Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka bareedinaatti ilaallamu arra jijjiiramee…
Nuuralhudaa	 May 12, 2022
Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan akkaan qaraa qaba. Kanaafis…